यसो गरे कसो होला, सहारा ? – BIG FM 101.2 MHz
Home » Featured » यसो गरे कसो होला, सहारा ?
अबको २ दिनपछि खेलप्रेमीको ध्यान पोखरामा तानिन्छ । कारण, पोखरामा १६ औँ आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ । जिन्दगीमा मैले मेरो प्रोफेसन र प्यासनसँग नजोडिएको काम र ठाममा कुनै समय कँहीकतै विन्दास बिताएको छु भने त्यो आहा रारा कप हुँदै गर्दा एउटा फुर्सदिलो दर्शकको रुपमा पोखरा रंगशालामा नै हो । साहरा क्लब फाइनलमा पुग्दा काठमाडौँको विशेष काम छाडेर रातारात धरान पुगेको अनुभव छ । तर, म कहिल्यै बरिष्ठ भएर सहारा क्लबको चिया पिउने वा चमेना खाने कार्यक्रममा उपस्थित भइनँ । असहाय बालबालिकाको सवालमा धेरै मान्छेलाई लाग्छ साहराले राम्रो उद्देश्य लिएको छ । एक हदसम्म यो सत्य हो । तर, फुटबलप्रेमीहरुको सेन्टीमेन्टसँग खेलिरहँदा साहराले यो बुझ्नु जरुरी छ कि खेल हेर्न आउने मजस्ताहरुको सरोकार खेलसँग मात्र छ । सिंगो रात जाग्राम रहेर संसारका उत्कृष्ट लिगहरु हेर्ने र खेलाडीको नामपिच्छे फ्यान क्लब गठन गर्ने फुटबल प्रेमीले उत्कृष्टता खोजेर होइन, अपनत्व रोजेर साहरालाई माया गरेका हुन्, रंगशाला आएका हुन् ।
समय बदलिएको छ । फुटबलको जुन क्रेज छ, त्यस क्रेजमार्फत् हामीले सिंगो पोखरालाई चिनाउन सकिरहेका छैनौँ । पोखराको पर्यटनलाई सोझै र सिधै विश्वभर चिनाउने क्षमता आहा रारा कपले राख्न सक्छ । विश्वभर हुने यस्तै प्रतियोगिताले सम्बन्धित देश र ठाउँको परिचय र प्रचारलाई प्रभावकारी भूमिका खेलेको हामीले देखेकै छौँ । आहा रारा कप चलुन्जेल त्यहाँ उच्चारण हुने प्रत्येक शब्दको मूल्य अमूल्य छ । त्यो मंचबाट हामीले धेरै कुरा विश्वसामू दिन सक्छौँ । तर हामीले अहिलेसम्म केके दिन सक्यौ ? केके दिन सकेनौँ ? अब सोच्नु र सुधार्नु पर्ने बेला आइसकेको छ ।
मेरा ७ सुझाब यस प्रकार छन्ः
१. जमान डिजीटलको छ । मान्छेहरुलाई भिडियो र तस्वीरले तान्छ । आहा रारा कपको प्रचार डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गर्न जरुरी छ । यसको लागि भईरहेको आयमा नयाँ खर्च छुट्याउँनु पर्दैन, अन्य अनावश्यक खर्च घटाई दिए पुग्छ । आहा राराले हरेक वर्ष पोखराको फरक फरक चिनारी हाइलाइट गरेर नयाँ नयाँ टिभीसी, रेडियो विज्ञापन, पेपर एड र प्रचार समग्री बनाउन सक्छ । तर, एउटै अडियो र भिडियो गीत १ दशकदेखि प्रस्तुत भई रहेको छ । सामान्य म्युजिक भिडीयोमा ड्रोन सट प्रयोग गर्ने र विज्ञापन वा चलचित्र बनाउँदा समेत सिनेमा स्कोप प्रविधी प्रयोग गर्ने जमानामा साहराले अहिलेसम्म फेसबुक लाइभ पनि गर्न सकेको छैन, अन्य क्रियटिभ प्रचार सामग्री त परको कुरा ।
२. आहा राराको ओपनिङ प्रोग्राम जहिले पनि झुरपटास हुने गर्छ । क्लबको अध्यक्ष र प्रमुख अतिथीबाहेक अरु कसैलाई बोल्न दिनु समयको बर्बादीमात्रै हो । १ घण्टा लगाएर आसन ग्रहण गराउनु आवश्यक छैन । आसन ग्रहण २ मिनेटमा टुङ्ग्याउनु जरुरी छ । खेलसँग सम्बन्धीत व्यक्तित्व र मुख्य प्रायोजकबाहेक अन्य राजनीतिक, प्रशासनिक र सरकारी ठालुहरुलाई माइकबाट चिच्याई चिच्याई पुकारा गर्नु आवश्यक छैन । त्यसले दर्शकको समयमात्र होइन मुडलाई पनि खराब बनाउँछ । ओपनिङ र क्लोजिङ्ग प्रोग्रामको स्टाण्डर्ड फिक्का छ । कुनै सुदुर गाउँमा हुने मेलाको ओपनिङ शैली र साहरा शैली उस्तै छ । फरक यत्ति हो, दर्शकको संख्या साहराको निमन्त्रणामा धेरै हुन्छन् । जति धेरै दर्शक हुन्छन् त्यसको स्टाण्डर्डलाई झन् उच्च बनाउनु जरुरी हुन्छ । रंगशालामा फुटबलमात्र दौडँदैन, फुटबलको बेगसँगै उत्तरबाट दक्षिण, दक्षिणबाट उत्तर दौडने प्रत्येक फोटो पत्रकारले लिने तस्वीर र भिडियोमा पोखरा पनि कैद हुन्छ । ती तस्वीर र भिडियोमा पोखरालाई चिनाउने थुप्रै आकर्षक संस्कृति, संगीत, कला, भेषभुषा र सम्पदाको झाँकी, र्याली र प्रस्तुती कैद हुने हो भने पोखरा विश्वसामु आहा रारा कपमार्फत् चिनिने छ । त्यो चिनारी हिमाल, पहाड र तालले अहिलेसम्म दिएको चिनारी भन्दा फरक हुनेछ ।
३. आयोजक सहारा हो । तर कार्यक्रम सिंगो पोखरेलीको हो । क्लबको सचिव होस् वा महासचिव उसैलाई कार्यक्रम चलाउने दिनु पर्छ भन्ने मान्यता अब आवश्यक छैन । ओृपनिङदेखि क्लोजिङसम्मका सम्पूर्ण कार्यक्रम छोटो र मिठो बनाउन प्रफोसनल उद्घोषकहरुलाई दिईनु जरुरी छ ।
४. अहिले सम्मका कपमा साहराले प्राफेसनल कमेन्टेटर राख्न सकेको छैन । कहाँ छ सहराको इतिहाँस ? हरि खड्का र बसन्त थापाले गरेको गोल र देवनारायण चौधरीले गरेको हेड गोलका दृष्यहरु के साहरासँग सुरक्षित छन्? कि पत्रिकाका अक्षरहरुमा खोज्नु पर्छ ? कार्यक्रम उद्घोषकलाई खेलाडीको नाम शुद्धसँग बोल्न आउँदैन । प्रत्येक वर्ष निकालिने रंगीन स्मारिका पढ्दा यस्तो लाग्छ साहरासँग आफ्नै इतिहासको कुनै दस्तावेज नै छैन ।
५. बहुचर्चित आहा रारा कपको उद्घोषण शैली गाउँले मेलाको जस्तो छ । सबैभन्दा हाँसोलाग्दो पक्ष के छ भने अझै पनि आहा रारा कपको त्यो विशाल सभामा एउटा रेडियो कार्यक्रमको नाम पुकारा गरेर त्यसको श्रोतालाई सम्मान गर्ने गरिन्छ । म त भन्छु कुनै पनि मिडियाको नाम लिनु जरुरी छैन । कार्यक्रमभर सबै मिडीयाले बराबर सपोर्ट गरैकै छन् । ३ दर्जन एफ एम, आधा दर्जन टेलिभिजन, २ दर्जन अनलाईन र १ दर्जन दैनिक २ दर्जन साप्ताहिकहरु मध्ये जो जसले आहा रारा कपको कभरेजमा ध्यान दिँदैनन् उनीहरु आँफै पछि पर्छन् । कपको ब्राण्ड त्यति माथि पुगि सक्यो तर व्यवहारमा हामी एउटा रेडियोको पण्डीतमार्फत श्राद्ध गरिरहेछौँ ।
६. सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई ठूलो समाजसेवी भनेर मंचमा ल्याउने, फुलमाला लगाउने र बढाई चढाई गर्ने परम्परा छ । अब जरुरी छैन । कुनै व्यक्तिले अरब रुपैयाँ नै सहयोग दिएको होस्, उसको कदर स्वरुप बडेमानको मूर्ति नै बनाएर साहराले आफ्नो परिसरमै राखे हुन्छ । तर, आहा राराको मंच र मैदानबाट ब्राण्ड बेच्नु पर्छ, व्यक्ती होइन । यो कुरालाई मनन गरियो भने लोकल र राष्ट्रियमात्रै होइन, अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डलाई पनि प्रायोजन र प्रमोसनमा सहभागी गराउन सकिन्छ ।
७. अब साहराले गरिब असाहय बालबालिकाहरुको लागि फुटबल भन्ने थिम नै बदल्न जरुरी छ । फुटबल सबैको खेल हो । धनीको छोराले पनि प्यासन छ भने फुटबल खेल्न सक्छ र पोखरा अनि देशको चिनारी राख्न सक्छ । फुटबलले गरिब धनी भन्दैन । जनताको सेन्टीमेन्ट जित्नकै लागि असहाय बालाबलिकाको नाम पुकारा गर्नु जरुरी छैन । असहाय, अनाथ र गरिबको लागि काम गर्ने एनजिओहरु प्रशस्त छन् । तर, प्रतिभावान् खेलाडीलाई संरक्षण गर्ने संस्थाको साँच्चिकै अभाव छ । साहरा फुटबल क्लब हो भने उसले कसरी फुटबलको टीम दह्रो हुन्छ तर त्यो टीमलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
र, अन्तमा साहराले आफनै ब्राण्ड नाममा समेत ख्याल गरेको छैन । भोली आहा रारा ब्राण्डले प्रायोजन गर्न बन्द गरेमा प्रतियोगिताको नाम के होला? मात्र गोल्ड कप?
जक्शन डटकमबाट साभार
नोट : लेखक बिग एफएम पोखराका अध्यक्ष हुन् ।